Ogaden News Agency (ONA) – Sir Culus: Akhriso Warqadii u Meles Saxiixay Qaabkii Dhulka Oromia Loola Wareegi Lahaa.
Sir Culus: Akhriso Warqadii u Meles Saxiixay Qaabkii Dhulka Oromia Loola Wareegi Lahaa.
Sida warqadan oo af xabashi kuqoran ku xusan Kaligii Taliyihii Bakhtiyay Meles Zenawi ayaa ansixiyay qorshihii lagula wareegi lahaa dhulka shacabka Oromiya.
Maamulka maqaar saarka ah ee katiliya Itoobiya oo sii kala siibanaya maalinba maalinta ka dambaysa ayaa laga helay warqadan oo macluumaad badan oo xasaasi ah ay ku xusan yihiin. Woyaanaha ayaa qorsheeyay qaabkii loola wareegi lahaa dhul balaadhan oo shacabka Oromiya ay leeyihiin isla markaana loo baro-kincin lahaa shacabka dhulkaas ku dhaqan.
Waxaa banaanbaxyo & mudaaharaadyo waa wayn oo dhiig badan ku daateen kawada degaamo badan oo kamid ah Gobolka Oromiya shacabka. Mudaaharaadyadan ayaa kusii fidaya deegaamo cusub. Shacab aad u cadhaysan oo ka dhiidhiyay dhul boobka kooxda Woyaanaha ayaa meelo kala duwan iskugu soobaxay kuwaasoo ku dhawaaqayay hal kudhagyo ay kamid ahaayeen kadib markay wixii warqadan kuqoraa * Males haduu Bakhtiyayna Ma Dhulkaanaguu Qaadanayaa?*.
Waxaa xusid mudan in kacdoon shacbi uu meelo kala duwan oo Itoobiya kamid ah hadheeyeen sida Kililka Axmaarada oo dagaalo culculus ay kasocdaan, Kililka Shucuubta Koonfureed oo Waraaqo kadhan ah Woyaanaha wadooyinka labo magaalo oo kamid ah lagu daadiyay iyo Kililka Oromiya oo dhul boob ba’an uu Gumaysigu kawado.
Taliska Woyaanuhu hormuudka u yihiin ayaad moodaa inuu noqday qorax galabaysatay oo wakhtigiisii dhamaaday. Gobolka Tigrey oo kamid ah meelaha ay abaaruhu saameeyeen ayaa dhibaatooyin badan laga soo sheegayaa. Wixii wararkan kasoo kordha wararkaanaga dambe yaad kaga bogan doontaan haduu ilaahay yiraahdo.